Mudaharaadkii ugu weynaa oo ka dhacaya Göteborg | Somaliska
Maalinta bari ah ee taariikhdu tahay 21 Maj ayaa waxaa magaalada Göteborg ka dhacaya mudaharaadkii ugu weynaa oo lagu taageerayo Masaajid halkaas laga dhisayo, mudaharaadka ayaa jawaab u ah mudaharaad ay qabanqaabinayaan cunsuriyiinta oo lagaga soo horjeedo Masaajidka. Dhamaan Soomaalida iyo Muslimiinta ku dhaqan Göteborg iyo agagaaraheeda ayaa loogu baaqayaa in ay ka soo qeyb galaan dibad baxaan aadka u balaaran iyadoo xitaa ay ka soo qeyb gali doonaan Muslimiin ka kala imaaneysa daafaha Yurub iyo Xitaa cunsuryiinta oo iyagana ka imaanaya Yurub. Mudaharaadka lagu taageerayo dhismaha Masaajidka ayaa ka dhici doona goobta lagu magacaabo HJALMAR BRANTINGSPLATSEN saacadu markay tahay 11.00 subaxnimo. Waxaa ka soo qeyb gali doonaa dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiro Muslimiin iyo gaalo intaba. Dibad baxa ayaa noqon doona mid nabad galyo ah oo ay ka mamnuuc tahay qalalaasaha. Booliska aya heegan ku jira iyagoo sheegay in la filayo mudaharaadkaan uu noqon doono kii ugu weynaa ilaa sanadkii 2001. Mudaharaadka lagaga soo horjeedo cunsuriyiinta ee lagu taageerayo Masaajidka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururada hoos ku qoran.
F! Feministiskt Initiativ
Göteborg mot rasism
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen
Sveriges Muslimska Stiftelse
Mudaharaadkii ugu weynaa oo ka dhacaya Göteborg
Maalinta bari ah ee taariikhdu tahay 21 Maj ayaa waxaa magaalada Göteborg ka dhacaya mudaharaadkii ugu weynaa oo lagu taageerayo Masaajid halkaas laga dhisayo, mudaharaadka ayaa jawaab u ah mudaharaad ay qabanqaabinayaan cunsuriyiinta oo lagaga soo horjeedo Masaajidka.
Dhamaan Soomaalida iyo Muslimiinta ku dhaqan Göteborg iyo agagaaraheeda ayaa loogu baaqayaa in ay ka soo qeyb galaan dibad baxaan aadka u balaaran iyadoo xitaa ay ka soo qeyb gali doonaan Muslimiin ka kala imaaneysa daafaha Yurub iyo Xitaa cunsuryiinta oo iyagana ka imaanaya Yurub.
Mudaharaadka lagu taageerayo dhismaha Masaajidka ayaa ka dhici doona goobta lagu magacaabo HJALMAR BRANTINGSPLATSEN saacadu markay tahay 11.00 subaxnimo. Waxaa ka soo qeyb gali doonaa dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiro Muslimiin iyo gaalo intaba.
Dibad baxa ayaa noqon doona mid nabad galyo ah oo ay ka mamnuuc tahay qalalaasaha. Booliska aya heegan ku jira iyagoo sheegay in la filayo mudaharaadkaan uu noqon doono kii ugu weynaa ilaa sanadkii 2001.
Mudaharaadka lagaga soo horjeedo cunsuriyiinta ee lagu taageerayo Masaajidka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururada hoos ku qoran.
1 Luuliyo Ma Xornimaan u Dabbaal Degnaa Mise Xornimaan Raadinaa?
Xisbiga Socialka oo dowlada cadaadis ku saaraya mideynta reeraha
Aad bay u fiican tahay runtii in laga qeyb galo mudaaharaadkan cunsuriyiintana waxaa kale oo ka soo horjeeda isla swedeshkii taas ah wax aad loogu farxo.
May 20, 2011 at 17:53
Waa arin aad u wanaagsan oo aan soo dhawaynaa , waana ku faraxsanay in qadka laga tuura ama awoodooda si wada jir ah loo wiiqo CUNSURIYIINTA ……. BALSE kiiska halagu darsado in dhib gaysan karaan ka dagaal dhisamaha MASJIDKA Alle ayaase NAGA amaansanaa .
Sidoo kale magaaladeena waxaa laga dhisaa MASJID aan weli la bilaabin dhismihiisa degmadase waa ansixiday dhisidiisa , waxaase la isku maandhaafsanya goobta, kabta , meesha , halka laga dhisi lahaa Alle ayaa noo fududaynaa Alle idinkiis. Aniga ra’yigaysase waxaan qabaa lacagta masjid cusub lagu dhisaa waa badanta waana malaayiin , isla markaana booska lagu dhisaa , oo MINAARAD loo yeelaa iyadoo aan dhul nagala awood badanya joogno , ka warama haddii ay ka haboonaan lahayd in lacagtaa Malaayiinta ah lagu gato XARUUN wayn oo HAWL wayn oo salaad leh , ISKOOL leh , MAKTABAD leh waxaa laga yaabaa markaa lacagta in ay kuu gado boos ka waasicsan kan masjidka laga aas aasaa isla markaana aad Masjid , maktabad , iskool Islaamiya AAD U ISTICMAASHID adigoon Cunsuriyiintaan isku kicin ileen XIKMAD BAA HABOONE ,
……………….AFEEF waa ra’yi ii gaara , haddii la igu raaco waxaan leeya Astagfurullah maxaa yeelay ra’yi in uu saxya aan la hubin waaye , haddii kalena walaalahayga ayaan ku ra’yi ahay
May 20, 2011 at 17:58
Hadii aan sii raacsado ra’yigaya YURUB MASJIDKA ugu wayn waxaa uu ku yaal Örebro waana masjid ay Iskool AHAAN U GATEEN , waxaana uu u leeya wax walba , iskool , Maktabad , xafiisyo iwm. Lacagtuna si wacan ayay ugu filnaatay . Marka meelo badan haddii la eego faaäiidooyinku waa
1: Cunsuriyiinta oo aan kaa Garhelayn oo aan helayn waxay dadka kale ka gadaan , awal ayaan qaati ka taagnayne .
2: Lacag ayaa kuu baaqanee , welibana aad Anfaca ku badisid .
3: Lacagtaa waxay kuu gadaa goob ka waasicsan Masjidka cusub .
Afeef waa raäyi ii gaara ÖÖÖ
May 20, 2011 at 19:11
waa arin aad uwanaagsan aloow diintaada quwee oo masaajidada noobadi diin kufaarta dulee diin islaanka quwee aamiin cunsuriyiintii qaati aalagataaganyahay waalayaaban yahay maxaa diinta kudiray cunsuriyiinta waxay wadaan sheekadii yahuuda
May 20, 2011 at 20:24
masha allah aad iyo add ayan ugu faraxsanahay dhisada masjidka cusub insha allah alle ayaa nala jira waxaan leeyahay walalaha muslimiinta ayagana in ay kalin qatan insha allah jazakumulahu qeyraa
Ibnu julux says:
May 21, 2011 at 09:02
Asc dhamaan muslimiinta gaar ahaan kuwa sweden joga ilahay ha.idin barakeye cududiina tusa gaalada o isu so baxiina muujiya wa intaas oy rucbikaqadane . Sidokale dadkakale e kunool yurubta kale maalintas shaqadina iyo waxbarashadina ubaajiya banan baxaas dartiis wa intaso ilahay ajirkina idinlaalaabaye asc